मानिसलाई एक दिनमा कति प्रोटिन चाहिन्छ ? यी हुन् प्रोटिनका भण्डार – ToplineKhabar
June 27, 2018 June 27, 2018 प्रदीप भट्ट0Comment
प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो हरेक उमेरका मानिसलाई आवश्यक हुन्छ। गर्भावस्थामा प्रोटिन बढी आवश्यक हुन्छ। शिशुको निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको अहम् भूमिका हुन्छ। मानिसको पूरै जीवनमा प्रोटिन धेरथोर आवश्यक भइरहन्छ। यसैले हाम्रो खानामा पनि कुनै न कुनै प्रोटिनजन्य खाद्यपदार्थ सामेल गराइएको हुन्छ। थाहा पाऔं प्रोटिन बढी पाइने खानेकुराहरु : स्वास्थ्य खबरबाट
← नारायणगढ- मुग्लिन सडक खण्डमा आज पनि पहिरो, बाटो अवरुद्ध
कहिले देख्नु भएको छ ? एउटै मण्डपमा एक बेहुला ३ बेहुली →
पूर्णमान स्मृति टेवलटेनिसमा राष्ट्रिय च्याम्पियन स्यान्टू पराजित
डा केसीसँगको सहमति टार्न हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ
August 20, 2017 toplinekhabar 0